Akụkọ - Otu esi ahọrọ bọọlụ Kegel | OMYSIMBA
Nsogbu kasịnụ ọtụtụ ụmụ nwanyị na-eche ihu bụ ịhọrọ nke ziri ezi kegel bọọlụ maka ụmụ nwanyị.
Ihe omuma a na enyere gi aka imata otu esi ahota Kegel nke oma iji nyere gi aka inweta ike gi na ihe izere.
Kedu Kegel bọọlụ ịhọrọ?
Gụọ ugbu a ka ị chọpụta:
Etu esi ahọrọ bọọlụ Kegel kwesịrị ekwesị
Otu esi amata ibido ibu gị
Etu ị ga - esi họrọ nke kacha mma Kegel ball design
Mgbe ịghara iji bọọlụ Kegel
Gụnyere akwụkwọ ịdebanye aha njirimara Kegel Ball anyị n'okpuru.
Bọọlụ Kegel nwere ike inyere ụmụ nwanyị aka ka ha nwee mmega ahụ Kegel wee jiri nwayọọ nwayọọ na-eme ka akwara pelvic ha dị ike.
Ha dị na ụdị dịgasị iche iche, nha, agba, ihe na ibu.
Họrọ ịkwanye mgbatị kwesịrị ekwesị dabere na ahụ gị na mmega ahụ gị. Omume egwuregwu Kegel nwere ike inyere gị aka iwusi ike ma weghachi ala pelvic gị ma kpalie mmega ahụ gị.
Họrọ Sizekpụrụ Kwesịrị Ekwesị Kegel Ball
A na-enweta bọọlụ Kegel n'ọtụtụ dịgasị iche na ụfọdụ bọọlụ ka dị mma iji kwado ụfọdụ ụmụ nwanyị karịa ndị ọzọ.
Ọ dị mkpa ijide n'aka na bọọlụ ị họọrọ nwere ntụsara ahụ ma nọrọ n'ọnọdụ ya mgbe ị na-eguzo maka mmemme Kegel ziri ezi.
Bọọlụ Kegel na-anọkarị n'ọnọdụ karịa ndị na-eme mgbatị cone pelvic dị warara, na-eme ka ha dabara nke ọma nye ụmụ nwanyị ndị nweburu ọmụmụ nwa.
Mara gị Esịtidem Size
Dịka onye ndu n'ozuzu, ịmara ogo nke gị dị ka:
a. Tampon a họọrọ - obere, ọkara ma ọ bụ nnukwu
b. Ngalaba Caesarean nke mbufe / mbufe naanị - na-abụkarị obere / ọkara nha
c. ihe Snug dabara mkpịsị aka 2 n'akụkụ akụkụ site na ikpu - nha nha nha
d. Ukwuu karịa 2 mkpịsị aka ohere mmamiri dayameta - ọkara ka nnukwu esịtidem size
e. N'ihu nnyefe mmamiri - ọkara / nnukwu nha
f. Obere tampons na-amịpụ n'ọnọdụ - ọkara / nnukwu nha ime
Kegel bọọlụ kacha mma maka obere nke dị n'ime:
29 mm n'obosara
Bọọlụ Kegel maka ọkara na nnukwu nha nke ụlọ:
35 mm nke dayameta
36 mm nke dayameta
Mara gị amalite ibu ibu
Bọọlụ Kegel dị na igwe dị iche iche na nke a na-adịkarị iche site na onye nrụpụta nke ọzọ.
Ebumnuche kwesiri ibido site na ibu pere mpe nke ị nwere ike jiri nwayọ bulie ma pịgharịa site na iji akwara pelvic gị maka ọtụtụ ugboro ugboro.
A na-enye ụfọdụ bọọlụ Kegel dị na bọọlụ bọọlụ nke gụnyere ọtụtụ bọọlụ nwere nwayọ nwayọ ma dikwa nke ọma maka mmega ahụ nke ọma. Njirimara a na - enye gị ohere ịmalite site na bọlbụ kachasị adaba ma nwee ọganihu gaa na bọl dị arọ karịa ka ịchọrọ
Ọ bụrụ na akwara pelvic gị esighi ike
Ọ bụrụ na pelvic gị esighị ike họrọ nhọrọ ịmalite ibu arọ:
ibu arọ 28- 78 g
ibu arọ 28-78 g
ịdị arọ nso 30-140 g
Iji nwee ọganihu pelvic n'ala
Ọ bụrụ na ị na-achọ ime ka ike gị dịkwuo ike karịa oge, họrọ nke bọọlụ Kegel nke ga-enyere gị aka inwe ọganihu site na bọọlụ dị arọ karị:
Smart bọọlụ 42 g (otu bọọlụ imewe) na 42 g (2 bọọlụ imewe)
Họrọ Kegel Ball Kachasị Mma
A na-enweta bọọlụ Kegel n'ụkpụrụ abụọ dị mkpa - otu bọọlụ na bọọlụ abụọ kpụrụ ma ọ bụ jikọta ya na njikota.
Single Kegel bọl imewe:
Kachasị mfe ibu
Adabara obere esịtidem size
Ezigbo maka ndị mbido
Abụọ obi ụtọ imewe:
Ọkara na ibu arọ
Kwesịrị ekwesị na ọkara / nnukwu nha ime
Kwesịrị ekwesị maka ụmụ nwanyị na-achọ inwe ọganihu Kegels
Etu esi amata bọọlụ Kegel gị
Kegel bọọlụ enweghị ike ifu n'ime ahụ gị; a na-emechi elu ikpu site na cervix ma ọ bụ kaa ya akara ma ọ bụrụ na ị nwere hysterectomy.
Ọtụtụ bọọlụ Kegel nwere eriri ma ọ bụ ndu etinyere maka ịdị mfe iwepụ.
Tụlee ihe ndị a mgbe ị na-ahọrọ bọọlụ Kegel gị iji hụ nchekwa nke pelvic na-emega ahụ:
Ndị na-emega ahụ dị mma bụ ndị na - adịghị mma nke ọma na - ebibi ngwa ngwa ma ndị a bụkarị ọnụahịa Kegel dị ọnụ ala.
Akụrụngwa - a na-arụpụta bọọlụ Kegel dị mma site n'iji ahụ dị mma PC ABS / silicone ma bụrụ n'efu Phthalate. Phthalates bụ ihe ụfọdụ eji eme ka ọ dị nro ma mee ka plastik dịwanye elu. Mgbe ndị na-eme pelvic na-adịghị mma nke nwere phthalates erode, ntọhapụ nke phthalates na-eme ngwa ngwa. Nchegbu ahụike banyere ojiji nke phthalates na-eduga ha ịhapụ ịhapụ ojiji na mba ụfọdụ. Anyị na-eche naanị bọọlụ Kegel n'efu.
Nhicha - Kegel bọọlụ na ndị na-emega ahụ nwere ebe na-enweghị ntụpọ na-enye ohere maka nhicha zuru oke. ABS plastik nwere ike sie ya mere igba ogwu. Mgbatị ahụ mgbatị na oke ọkpọ na grooves nwere ike isi ike nhicha nke ọma.
Nkwa - ngwa ahia na akụrụngwa nwere ike ịnye gị mmesi obi ike gbasara mma na nchekwa nke onye na - emega ahụ.
Nhọrọ mmanu dịkwa mkpa ebe ọ bụ na ndị na-eme mmanụ ala ma ọ bụ ndị nwere silicone nwere ike imebi elu plastik bịara. Mmiri mmanu mmiri bụ nke kachasị dabara adaba maka ndị na-eme pelvic n'ihi na ha agaghị emebi emebi ma dị mma maka anụ ahụ dị n'ime.
Nkwado nchekwa - ịhọrọ bọọlụ nke zutere nkwado FDA nwere ike ime ka ị jide n'aka nchekwa nke ngwaahịa gị.
Tụlee ihe ndị a mgbe ị na-ahọrọ bọọlụ Kegel kacha mma maka mkpa gị:
Agba bọọlụ ziri ezi
Kegel bọlbụ kwesịrị ekwesị maka ike pelvic dị ugbu a
Ike itinye mgbakwunye ọzọ maka nsogbu ọzọ
Ogo ihe onwunwe na rụpụta
Ihe nchekwa (enweghị phthalates)
Mfe kpochara ma dị ọcha
Kegel Ball set gụnyere bọọlụ dị arọ maka ịga n'ihu nke iwusi ike
Họrọ bọọlụ Kegel kwesịrị ekwesị iji gboo mkpa gị pụtara ịha nha na ike dị n'ime ya na onye mmega ahụ kwesịrị ekwesị.
Edebere ntuziaka a iji nyere gị aka ịmata nke bọọlụ Kegel kachasị dabara maka ahụ gị yana mkpa ike gị.
Nchọgharị metụtara kegel ball:
kegel mmega bọl maka ọrịre
kegel mmega bọl price
kegel mmega bọl
Post oge: Jan-13-2021